Loving Kindness – Dhammadīpa
Posted on 30 Dec 2017 by Ashin Sopāka
“Just as in the last month of the rainy season, in the autumn, when the sky is clear and free of clouds, the sun, on ascending, dispels the darkness of space and shines forth, bright and brilliant, even so, whatever grounds there are for making merit productive ofafuture birth, all these do not equalasixteenth part of the mind-release of loving-kindness, the mind-release of loving-kindness surpasses them and shines forth, bright and brilliant.” – Iti 27
“Seyyathāpi, bhikkhave, vassānaṁ pacchime māse saradasamaye viddhe vigatavalāhake deve ādicco nabhaṁ abbhus­sakka­māno sabbaṁ ākāsagataṁ tamagataṁ abhivihacca bhāsate ca tapate ca virocati ca; evamevaṁ kho, bhikkhave, yāni kānici opadhikāni puñ­ñakiri­ya­vatthūni sabbāni tāni mettāya cetovimuttiyā kalaṁ nāgghanti soḷasiṁ, mettāyeva tāni cetovimutti adhiggahetvā bhāsate ca tapate ca virocati ca.”
ရဟန်းတို့ မိုးဥတု၏ နောက်ဆုံးဖြစ်သောတန်ဆောင်မုန်းလ သရဒဥတု၌ ကောင်းကင်ဟင်းလင်း ဖြစ်၍မိုးတိမ်ကင်းလတ်သော် နေမင်းသည် ကောင်းကင်သို့ တက်လျက် ကောင်းကင်ရှိ အမိုက်တိုက်အားလုံးကို ပယ်ဖျောက်၍ တောက်ပြောင်လည်း တောက်ပြောင် ထွန်းပလည်း ထွန်းပ တင့်တယ်လည်း တင့်တယ်သကဲ့သို့ ဤအတူ ခန္ဓာဟူသော ဥပဓိအကျိုးရှိကုန်သော ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပုညကိရိယဝတ္ထုဟူသမျှအားလုံးတို့သည် မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော စိတ်၏လွတ်မြောက်မှု (အပ္ပနာဈာန်) ၏ တစ်ဆယ့်ခြောက်စိတ်စိတ်၍ တစ်စိတ်ကိုမျှ မထိုက်တန်ကုန်။ မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော စိတ်၏လွတ်မြောက်မှု (အပ္ပနာဈာန်)သည်သာလျှင် ထိုပုညကိရိယဝတ္ထု ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို လွှမ်းမိုး၍ တောက်ပြောင်လည်းတောက်ပြောင်၏။ ထွန်းပလည်း ထွန်းပ၏။ တင့်တယ်လည်း တင့်တယ်၏။
“Này các Tỷ-kheo, ví như vào tháng cuối mùa mưa, vào mùa thu, trên bầu trời thanh tịnh, các mây được quét sạch, mặt trời mọc lên trên bầu trời, phá tan mọi tối tăm ở hư không, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, phàm có những nghiệp vụ đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát, vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng.”
Black Crowned Night Heron ©Ashin Sopāka 2017
This entry was posted in Dhamma and tagged dhamma, loving kindness, metta by Ashin Sopāka. Bookmark the permalink.
← Previous Previous post: Worthy Laylife
Next → Next post: Truth of Others?